Galmudug oo Maamul Cusub u Magacaawday degaanka Xero-Dhagaxleey – DMS
HomeWararkaGalmudug oo Maamul Cusub u Magacaawday degaanka Xero-Dhagaxleey
Galmudug oo Maamul Cusub u Magacaawday degaanka Xero-Dhagaxleey
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Arrimaha Gudaha dowlad Goboleedka Galmudug ahna ku-simaha Wasiirka ayaa waxaa uu Maamul cusub u Magacaabay Deegaanka Xero-Dahableey oo horay loogu yaqaaanay Deegaanka Xero-Dhagaxleey oo ka tirsan gobolka Mudug.
Qoraal kasoo baxay Xafiiska Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Galmudug Axmed Cusmaan Aadan ( Qooje) ayaa waxaa lagu yiri” Aniga oo tixgalinaya soo Jeedinta Dhamaan waxgaradka iyo Siyaasiinta Gobolka Mudug, gaar ahaan Deegaanka Xero-Dahableey, gudanayana waajibkeyga Dastuuriga waxa uu Maamul loo wada dhanyahay u magacaabay degaanka Xero-Dahableey.
Ilaa 15 Xubnood ayaa loo Magacaabay nay noqdaan maamulka degaanka Xero-Dahableey, kuwaas oo isugu jira Guddoomiye, Guddoomiye kuxigeen, Xogheyn, Afhayeen & 11 Xubnood, waxaana Magacyadooda kala yihiin.
Xasan Shiekh Cilmi Cosoble
Siciid Tahlil Guuleed
Cali Maxamed Guuleed
Maxamed Cali Carab
Cabdulahi Garaad Diiriye
Cabdalle Cali Abshir
Cabdi Maxamed Ducaale
8: Maxamed Maxamuud Bulaale
Cismaan Maxamuud Dige
Xirsi-Dahir Maxamed Sahal
Hodan Shariif Maxamed
Seynab Muxidiin Cosoble
Maxamed Sharif Maxamuud
Cali Warsame Cali
Cabulaahi Roble Jimcaale
Ugu dabeyn qoraalka Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Arrimaha Gudaha dowlad Goboleedka Galmudug ahna ku-simaha Wasiirka ayaa waxaa lagu soo geba gabeeyay.
“ Wasaaraddu waxa ay Ka rajeynaysaa Maamulka Cusub Ee Deegaanka Xero-Dahableey inay si hufan u gutaan Masuuliyada culus Ee loo igmaday, kana Shaqeeyaan Barnaamijyada horumarinta deegaanka iyo Bixinta Adeegyada Aasaasiga Ee Dadweynaha.
Dood kusaabsan xoojinta iyo sare u qaadidda Waxbarashada Caruurta Baahiya Gaarka ah Qaba oo ka dhacday Garoowe